Igbo, John: Lesson 066 - Aturu na - anu olu ezi onye nlekuta (Jọn 10:1-6) | Waters of Life
Home – Igbo – John - 066 (Sheep hear the voice of the true shepherd; Jesus is the authentic door)
a) Aturu na - anu olu ezi onye nlekuta (Jọn 10:1-6)
N'isi nke 7 na nke 8, Jizọs gosiri ndị iro ya eziokwu nke ọnọdụ ha, mgbe ahụ na isi 9, ha kpuo ìsì ka ha mara ihe banyere Chineke na Ọkpara ya nakwa dịka onwe ha. N'isi nke iri, ọ na-agbapụta onwe ya n'aka ọrụ nke ịgbaso ndị ndu ha na-eme mmehie, ma kpọọ ha onwe ha. Ọ bụ Ezigbo Onye-ọzụzụ atụrụ, nani ọnụ ụzọ na-eduga na Chineke.
1 N'ezie, n'ezie, asim unu, Onye nāgaghi-abà n'ọnu-uzọ n'ogige-aturu, kama ọ nārigo n'uzọ ọzọ, onye ahu bu onye-ori na onye nāpunara madu ihe. 2 Ma onye nābà n'ọnu-uzọ bu onye-ọzùzù-aturu. 3 Onye nche ọnụ ụzọ meghere ọnụ ụzọ ámá ya, atụrụ na-egekwa olu ya ntị. Ọ na-akpọ atụrụ ya aha, na-eduga ha. 4 Mgbe ọ bụla ọ na-akppụta atụrụ ya, ọ na-aga n'ihu ha, atụrụ na-esokwa ya, n'ihi na ha maara olu ya. 5 Ha agaghị eso onye bịara abịa ma ọlị, kama ha ga-agbapụ n'ebe ọ nọ; n'ihi na ha amataghi olu ndi ala ọzọ. 6 Ma Jizos gwara ha okwu-ugha a, ma ha aghọtaghi ihe Ọ nāgwa ha.
N'obodo ụfọdụ, ndị nkịtị na-achịkọta atụrụ ha na nnukwu ogige ma na-eche ya nche n'abalị. N'ụtụtụ, ndị ọzụzụ atụrụ na-abata ma banye n'ogige ahụ na-akpọ atụrụ ha. Ndị nche nyere ha ohere ịbanye, mgbe ahụ, ihe dị njọ na-eme: ndị ọzụzụ atụrụ anaghị eji ụgbọala ma ọ bụ dọpụta atụrụ ha site n'ọgba aghara ahụ, ma kpọọ ya n'emeghị ka a ghọta ya. Atụrụ nwere ike ịsị otu olu site na nke ọzọ, ma soro olu onye ọzụzụ atụrụ ha. Ọbụna ma ọ bụrụ na onye nwe onye ọzụzụ atụrụ na-eji ejiji, atụrụ ga-agbaso olu onye nwe ha. Ọ bụrụ na ọ bụrụ na onye ọzụzụ atụrụ mara mma ga-edozi onwe ya dịka onye nwe ha, atụrụ ahụ agaghị agagharị ma ọlị. Atụrụ na-eso ezi olu nke ezi onye ọzụzụ atụrụ. Site n'ịkpọ ya na-eduga onwe ya gaa ebe ịta nri na mmiri na-enye ume ọhụrụ. Umu aturu ya n'azu ya; ọ dịghị otu n'ime ha nọ n'azụ; ha tụkwasịrị obi onye ọzụzụ atụrụ ha n'ụzọ zuru ezu.
Jizos jiri ihe omuma a gosi ayi na ndi nile ndi di njikere ge nti olu ya, n'ihi na ha Jisos bu onye nlekota Chineke. Biakwuteghi ndi nke Ochie Ochie ka ha weghata maob izu ohi, ma o kpebiri ndi ah di icheiche nke Chineke n'etiti ha ma kporo ha ka Ya onwe Ya. Ọ napụtara ha ma nye ha nri ime mmụọ. "Ndị ọzụzụ atụrụ" ndị ọzọ dị ka ndị na-apụnara mmadụ ihe na-agbagharị ìgwè ewu na atụrụ dị ka anụ ọhịa wolf agụụ. Ha na-abanye na enyemaka nke ndị ọrụ na aghụghọ. Ha na-anara atụrụ ha ma rie ha. Ha na-ebi ndụ maka onwe ha na-asọpụrụ onwe ha. Ha anaghị ejere ezi ìgwè atụrụ ahụ ozi n'ezie. Ndị pastọ na ndị sava n'ime ụka ndị Chineke na-akpọghị n'onwe ha na ndị na-anọghị na Kraịst n'ezie, Onyenwe anyị na-akpọ ndị ohi a. Ha na-emerụ ahụ kama inye aka.
Jizọs buru amụma na ezi ndị na-eso ụzọ ya ga-ezere ndị ọzụzụ atụrụ na-abụghị ndị ọbịa ma nọrọ iche n'ebe ha nọ, na-aghọta ihe ize ndụ n'oge. O gwakwara ha ka ha tụkwasị nkwa ahụ na Chineke n'onwe ya ga-elekọta ìgwè atụrụ ya dịka e dekọrọ n'Abụ Ọma nke 23.
Ndị mmadụ aghọtaghị okwu Jizọs, n'amaghị na 'onye ọzụzụ atụrụ ha ekwesịghị ntụkwasị obi na ihe ọjọọ (Jeremaịa 2:8; 10:21; Ezikiel 34:1-10; Zekaraịa 11:4-6). N'agbanyeghị nke a, Chineke dị njikere, ịghọ Ezi Onye Ọzụzụ Atụrụ, ịzọpụta ndị Ya ma zite ha ndị pastọ nwere ezi obi, dịka Mozis na Devid nọ. Bible na eji ihe omuma nke ndi ozo; okwu "onye ọzụzụ atụrụ" na "ìgwè ewu na atụrụ" na "Nwa Atụrụ Chineke" na "mgbapụta site n'ịwụfu ọbara," sitere na ụdị echiche nke obodo pastoral. Akpara Chineke nimee kpara Ya Onyeo blaatrah, wee mesie ya ike banyere ya.
b) Jizos bu ezi onu (Jọn 10:7-10)
7 Ya mere Jizos siri ha ọzọ, N'ezie, n'ezie, asim unu, Mu onwem bu ọnu-uzọ aturu. 8 Ndị niile bịara n'ihu m bụ ndị ohi na ndị na-apụnara mmadụ ihe, ma atụrụ ahụ egeghị ha ntị. 9 Abụ m ọnụ ụzọ. Ọ bụrụ na onye ọbụla abanye m, a ga-azọpụta ya, ọ ga-abanye wee pụọ, ọ ga-achọta ebe ịta nri. 10 Onye ohi na-abịa izu ohi, gbuo, na ibibi. Abiara m ka ha wee nwee ndụ, ma nwee ike inweta ya n'ụba.
Jizọs kọwara onwe ya dịka ụzọ na-eduga n'ìgwè atụrụ Chineke. Enweghi uzo iji soro ndi gbaputara na ndi nzuko na ndi kwere ekwe na ndi Kraist no. Onye na-anwa ime otu okpukpe n'enweghị Kraịst yiri onye ohi nke na-emegharị uche nke atụrụ Chineke na njehie. Mmuo Nso adighi edu anyi site nzo wagharia, kama b nime uzo di warara nke Jizos. Onye ọ bula nke nābàghi nime ya, nke nēri kwa anu-aru-ya, nke nādighi-aṅu kwa ọbara-ya, enweghi ike ijere umu Chineke ozi. Anyi onwe anyi aghaghi inwu n'onodu obi ojoo ma banye n'ogige nke Kraist; mgbe ahụ, anyị na-eso n'ìgwè atụrụ ya.
Ndị niile a ma ama bụ ndị pụtara n'ihu ma ọ bụ mgbe Kraịst nwụsịrị ma ghara ibi ndụ site na Mmụọ Nsọ Ya, bụ ndị ohi na-aghọ aghụghọ. Jisos kwuru na ndi nkuzu ihe nile na ndi isi ihe na ndi isi obodo bu ndi ohi ma oburu na ha ekwegh na ya ma rubere ya isi; ha na-eji ozizi na àgwà ha emerụ ìgwè mmadụ ahụ. Ma ezi ndị amụma bụ ndị na-anọgide na Mmụọ Kraịst na ndị bu ụzọ kwuo ya nwere obi mgbawa, na-abịakwute Chineke n'ọnụ ụzọ. Jizọs kwadebere ha ma zipụ ha ka ha jiri obi ha niile na-ejere ìgwè atụrụ ya ozi na n'ogige atụrụ.
O Dighi onye pr ibà n'ogige nke Chineke maob ghi na o nwuru n'onwe ya wee rapara Jizos ike ichebe ya. Jizọs mere ndị eze na ndị nchụàjà ya na-erube isi. Onye pastọ nwere ezi obi si n'ọnụ ụzọ banye n'ụwa na-adọrọ ndị mmadụ ọdụ ka a zọpụta ha. Mgbe ahụ, ọ ga-eso ha laghachi n'ime ahụ nke Kraịst, ka ha wee dịrị n'ime ya na ya n'ime ha. Ndị pastọ dị otú ahụ adịghị ewere onwe ha dị ka ndị ka atụrụ, n'ihi na ha nile na-abanye n'ime Kraịst. Onye ọ bụla nke na-anọgide na ịdị umeala n'obi, na-achọta n'ime Onyenwe ya njuputa nke ike na ihe ọmụma. Obi umeala ahụ na-achọta n'ebe Jizọs nọ ịta ahịhịa na-adịghị agwụ agwụ.
Ugboro anọ Jizọs dọrọ aka ná ntị ìgwè atụrụ ya megide ndị odeakwụkwọ na ndị ụkọchukwu na-achọ otuto nke ha na imebi ndị ọzọ.N'otu oge ahụ Kraist kpọrọ mmadụ niile ka ha nye onwe ya ndụ nke ịdị mma na udo ma mee ka ọ bụrụ isi iyi nke ngọzi nye ndị ọzọ. Onye obula nke nabiakute Kraist ghoro miri nke ezi omume nke nadakwasi ndi ozo. Ndị ọzụzụ atụrụ adịghị ebi ndụ maka onwe ha, ma na-achụ ụbọchị na ndụ ha maka ìgwè ewu na atụrụ. Mmụọ nke Chineke adịghị enye anyị ndụ nke eluigwe naanị maka nzọpụta nke onwe anyị, kama ọ họpụtara anyị ndị ohu na ndị ozuzu aturu iji jụ onwe anyị ma hụ ndị ọzọ n'anya. Site n'ịba ụba nke ịhụnanya enwere mmụba nke njubiga ókè. Ọ dịghị ihe dị mma karịa ọrụ maka Onyenwe anyị! Nke a bu okwu a, "Ka ha wee nwee ndu karia!"
EKPERE: Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, ekele gị maka ịbụ ụzọ nke na-eduga na Chineke. Anyị na-efe gị n'ihi na ị kpọrọ anyị ka gị na gị na-akpakọrịta, na-ejere Chineke na mmadụ ozi. Nyere anyị aka ido onwe anyị n'okpuru onwe anyị ma chọta ezi ndụ. Kwado anyi ka anyi merie mkpuru obi di ka mmuo unu na - edu, ma buru ndi mmadu nile n'amara unu nyere anyi.
Olee ngọzi ndị Jizọs na-enye atụrụ ya?